Maitiro Ekushandisa TikTok Kune B2B Kushambadzira | Martech Zone
TikTok ndiyo inokurumidza kukura pasocial media chikuva munyika, uye ine mukana wekusvika kupfuura 50% yehuwandu hwevanhu vakuru veUS. Kune akawanda emakambani eB2C ari kuita basa rakanaka rekusimudzira TikTok kuvaka nharaunda yavo uye kutyaira kwakawanda kutengesa, tora. Duolingo's TikTok peji semuenzaniso, asi nei isu tisingaone mamwe bhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) kushambadzira paTikTok?
Semhando yeB2B, zvinogona kuve nyore kupembedza kusashandisa TikTok sechiteshi chekushambadzira. Mushure mezvose, vanhu vazhinji vachiri kufunga TikTok iapp yakachengeterwa vechidiki vekutamba, asi yakawedzera kupfuura izvozvo. Mumakore mashoma apfuura, zviuru zvenharaunda niche dzinoda cleantok uye booktok vakagadzira paTikTok.
Kushambadzira kweB2B paTikTok ndeyekutsvaga nharaunda inoenderana nechigadzirwa chako zvakanyanya uye kugadzira zvakakosha zvenharaunda iyoyo. Izvi ndizvo chaizvo zvatinoita pane yedu TikTok peji paCollabstr, uye nekudaro, takakwanisa kugadzira zviuru zvemadhora mubhizinesi idzva sekambani yeB2B.
Saka ndedzipi dzimwe nzira dzeB2B kushambadzira paTikTok?
Gadzira Organic Content
TikTok inozivikanwa nezvayo organic kusvika. Iyi puratifomu inopa zvakanyanya organic kuratidzwa kupfuura echinyakare mapuratifomu seFacebook kana Instagram. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kuwana huwandu hwakanaka hwemaziso pane yako B2B brand nekungotumira organic zvemukati kune yako TikTok peji.
Saka ndeapi marudzi ezvinyorwa zvemukati zvaunogona kutumira kune yako B2B brand?
Case Studies -Nyaya zvidzidzo inzira huru yekukwezva vangangove vatengi pasina kushambadza zvakananga kwavari. Iwe unogona kugadzira nyaya yekudzidza nekutsvaga nyaya dzebudiriro muindasitiri yako uye kuratidza zvinhu zvavakaita zvakanaka kune vateereri vako. Semuyenzaniso, kana iwe uri dhijitari yekushambadzira kambani inogadzira vhidhiyo ads kune vatengi vako, ita zvimwe zvidzidzo pane akanakisa B2B vhidhiyo ads uye nei achinyatso shanda. Unogona kutora ads kubva kumakambani akaita seRed Bull uye uudze vanhu kuti sei vari kushanda kudaro. Nomuzvarirwo, iwe unokwezva vanhu vari vatengesi kana varidzi vebhizinesi vachitsvaga munhu anovaitira ads. Zvidzidzo zvenyaya zvinokutendera kuti uzvimise senyanzvi, izvi zvakanaka nekuti kana vateereri vako vagadzirira kutenga, vanenge vachiuya kwauri kutanga.
Sei-KuVhidhiyo -Maitiro-ekuita mavhidhiyo inzira huru yekukwezva vateereri vako paTikTok. Nekupa kukosha kuburikidza nedzidzo, iwe unovaka yakavimbika yekutevera yevanogona kuve vatengi. Kuti ugadzire anobudirira maitiro-ekuita mavhidhiyo emhando yako yeB2B, unofanirwa kutanga wanzwisisa mutengi wako. Kana mutengi wako ari vamwe varidzi vebhizinesi, saka zvemukati zvinofanirwa kukwidza kwavari zvakananga. Semuenzaniso, kana ndikamhanyisa B2B graphic design agency, ndingangoda kugadzira vhidhiyo inoratidza vamwe vanhu magadzirirwo avanogona kugadzira logo yemahara yemhando yavo. Nekupa kukosha, unokwezva vateereri vanovimba newe.
Kunze kweChechi -Iyo mbishi chimiro chepfupi-vhidhiyo zvemukati zvinopa mabhizinesi mukana wekuve pachena. Kusiyana nemamwe mapuratifomu senge Instagram, zvakanaka kutumira zvisina kupukutwa uye mbishi kuseri kwezviitiko zvirimo paTikTok. Kutumira mavlogs, misangano, uye nhaurirano dzinoratidza mashandiro ezuva nezuva kukambani yako yeB2B zvinovaka kuvimbana pakati pebhizinesi rako nemutengi wako waunoda. Pakupera kwezuva, vanhu vanobatana nevanhu zviri nani pane kubatana nemakambani.
Tsvaga TikTok Influencers
Kana usina chokwadi chekuti ungatanga sei kugadzira zvemukati zvekambani yako yeB2B paTikTok, funga kutsvaga vanofurira muniche yako kuti vakubvise pasi.
Goredzva rakanaka mhuri? Heano mashandisiro aungaite Collabstr kumhanyisa kukurudzira mishandirapamwe! #collabstr
♬ yekutanga ruzha - Collabstr
TikTok influencers inogona kubatsira bhizinesi rako reB2B nenzira dzakasiyana siyana. Ngatinyure mune shoma dzenzira dzaunogona kukwidziridza vapesvedzera kune yako B2B kushambadzira paTikTok.
Sponsored Content - Imwe nzira huru yekukwidziridza TikTok vapesvedzera kune yako B2B kushambadzira ndeyekutsvaga uye kuhaya vanofurira mune yako niche kuti vakugadzirire zvakatsigirwa zvemukati. Ngatitii iwe uri gore rinopa mupi uye uri kuyedza kuwedzera kuratidzwa kune varidzi vebhizinesi kuburikidza neTikTok. Imwe nzira yakanaka yekuita izvi ndeye tsvaga anofurira munzvimbo yetekinoroji, ine vateereri vevamwe tekinoroji vanowanzoda cloud hosting yezvigadzirwa zvavo. Tora uyu mugadziri weTikTok, semuenzaniso, iye mugadziri wesoftware, uye vateereri vake vangangove vachifarira kunzwa nezve cloud hosting solutions.
TikTok Ads - Imwe nzira huru yekusimudzira TikTok influencers ndeyekuita kuti vagadzire zvirimo kune ako ads. Kana iwe uchinge wawana anofurira anonzwisisa zvechokwadi chigadzirwa chako, unogona kuvabhadhara kuti vagadzire emhando yepamusoro vhidhiyo ads yechigadzirwa chako cheB2B kana sevhisi. Pamusoro pemupesvedzera kugadzira ads, iwe unozogona chena zvirimo zvakananga kuburikidza neTikTok, kana iwe unogona kungotora iwo ekutanga mafaera kubva kwavari uye womhanya iwo sekushambadzira kune mamwe mapuratifomu zvakare. Kushandisa vanofurira kugadzira yako TikTok ads inogona kuwedzera mutsetse wehumbowo hwemagariro uye huchokwadi husipo neiyo yechinyakare-yemhando yezvinyorwa.
Maitiro ekugadzira TikTok ads asingayamwi? #collabstr
♬ Zuva Rezuva - Ted Fresco
Hire TikTok Zvemukati Vagadziri - Imwe nzira yekukwidziridza TikTok influencers kune yako B2B mhando ndeyekungohaya ivo kuti vakugadzirire zvemukati. TikTok influencers vanonyanya kujairana nepuratifomu, algorithm yayo, uye vateereri vanodya zvirimo paTikTok. Vachishandisa ruzivo urwu, vanogona kugadzira zvinokwezva uye zvinonakidza zvemukati zvinowana hukuru hwekuona. Ichi chinogona kunge chiri chimwe chinhu icho timu yako isingakwanise kuita, izvo zvakanaka, Kana zvakadaro, tsvaga anofurira anonzwisisa yako B2B chigadzirwa kana sevhisi, uye uvabhadhare pamwedzi kuti vagadzire zvirimo zvepeji rako.
Kana uchitarisa TikTok seB2B yekushambadzira chiteshi, zvakakosha kuti uvhure pfungwa dzako kune dzakasiyana nzira dzaungatore sekambani yeB2B paTikTok.
Kutanga, iwe unofanirwa kuona vateereri vako vavanoda. Ndiani anonyanya kuwana chigadzirwa chako chinobatsira? Kana uchinge waziva vateereri ava, unofanirwa kuziva kuti ndiani ari kutotapa vateereri paTikTok.
Kubva pano, unogona kuhaya munhu ari kutoita basa rakanaka rekutora vateereri, kana kuti unogona kushandisa zvirimo sekurudziro uye wotanga kugadzira zvako zvemukati zvakagadzirirwa vateereri vakafanana.
Tsvaga TikTok Influencers Tevera Collabstr paTikTok
kuburitsa: Martech Zone iri kushandisa yayo affiliate link ye Collabstr munyaya ino.
Tags: b2bb2b kushambadzirab2b marketing strategyshure kwezviitikobooktokzvebhizimisi-to-bhizimisinyaya yokudzidzacleantokcollabstrduolingosei-kumavhidhiyokuchinjakushambadzira kushambadziraorganic contentshort videoTikToktiktok adstiktok content vagadziritiktok vanokurudziraVideo contentvhidhiyo yemukati zanovhidhiyo zvikabudura